20 Zvinoshamisa Zvinhu zvinoita kuti Iyo Bahamas ive Tropical Hot Spot
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » 20 Zvinoshamisa Zvinhu zvinoita kuti Iyo Bahamas ive Tropical Hot Spot
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
20 min kuverenga
Vaviri vachizembera pamusoro pegungwa muThe Bahamas kuSandals Royal Bahamian
Zvitsuwa zveBahamas inzvimbo inopisa inopisa uye chinzvimbo pakati penzvimbo dzakanakisa dzekuzorora pasi rese. Runako rwavo, kunoshamisa kwemamiriro ekunze, uye chokwadi chekuti kune zviwi zvakawanda kwazvo (700 zvachose) chikamu chezvinoita kuti nzvimbo dzinopisa dzedenga dzive dzakakosha.
Kunyangwe nekuzivikanwa kwavo, pane zvimwe zvinhu zvausingazive nezve maBahamas usina kuendako iwe pachako; kufanana nenyaya yekuti iwe unogona kushambira nenguruve paBig Major Cay, kana kuti chitsuwa chine inonakidza nhoroondo yepirate. Kana iwe uri kuronga rwendo kuenda kuBahamas, ziva kuti iwe uri mune yezororo rekuzorora.
20 ZVINHU ZVINOSHAMISA MABAHAMA ZVINOZIVIKANWA
1. Pristine jecha jena mahombekombe uye turquoise mvura
NASA Astronaut Scott Kelly ane zita rekuti The Bahamas "nzvimbo yakanaka kwazvo kubva muchadenga", uye zviri nyore kuona kuti sei. Nemahombekombe ejecha jena akanaka, akakomberedzwa nepalet inoshamisa yemvura yakadzika yebhuruu uye turquoise, iyi tropical paradhiso zvechokwadi inomira. Imba kune mamwe emahombekombe ejecha jena jena pasi rese, iwe unogona kunge uchisangana nemahombekombe achisvetuka sezvisina kumboitika Ndiyo nzvimbo yekupedzisira yezororo kumahombekombe!
Insider zano: Kune akawanda mahombekombe makuru muThe Bahamas, zvekuti zvinogona kuve zvakaoma kusarudza imwe chete. Neraki, isu tabatanidza runyorwa rwe mahombekombe akanakisa muThe Bahamas. Inzwa wakasununguka kuenda kugungwa hop kune zvemukati zvemwoyo wako!
2. Nguruve dzinoshambira dzeExuma
VaBahamas vane kushambira kwakakurumbira pane ruzivo rwevenguruve muCaribbean, uye chiri chinhu chausingade kupotsa, panguva yako yezororo muzvitsuwa. Iwe unofanirwa kutora chikepe kuenda kuBig Major Cay, inozivikanwawo sePig Island kune urwu rwendo, uye kana iwe ukangosvika padhuze zvakakwana kuchitsuwa ichi, uchanyatso ona dzimwe dzenguruve dzichishambira kuenda kuchikepe chako kuzokukwazisa. Urwu rwendo rwemhuri rune hushamwari, asi vakaroora vanonakidzwawo neruzivo, uye nekuziva nguruve dzinoshambira dzeBahamas. Big Major Cay inowanikwa anenge makiromita makumi masere kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNassau. Kunze kwenguruve nevanozvichengeta pane dzimwe nguva dzezuva, chitsuwa hachigarwi.
3. Nhandare yevakapfuma nevakakurumbira pasi rose
Kune akatiwandei ezvitsuwa muCaribbean ayo anozivikanwa kukwezva vapfumi nevakakurumbira, uye maBahamas akakwira kumusoro pane iwo runyorwa. Vakuru vakapfuma vafambi vanobva pasirese pazororo muBahamas. Rudzi rwechitsuwa runotopa iwe uber mikana yakapfuma kune kutenga zviwi zvavo zvega. MuBahamas, iwe unozokwanisa kuve nekutarisisa kumahombekombe egungwa eOprah Winfrey, Michael Jordan nevamwe vazhinji vanozivikanwa.
4. Nhoroondo yevapambi
Mufananidzo wakakodzera naSergey Goryachev - Shutterstock.com
Iyo 'Golden Era' kana iyo 'Golden Age' inonzi yanga iri nguva muma1600s - 1700s, apo vapambi vaive nehupfumi hwakakura muCaribbean, kunyanya muThe Bahamas. Vakanangisa ngarava dzevatengesi dzaifamba nechiteshi ichi ndokuvabira. Kubwinya kwavo kwaisanganisira goridhe, munyu uye zvimwe zvakawanda zvinhu. Zvavakawana zvakakwezva vatengesi vakawanda, uye pakati pevapambi vane mukurumbira mudunhu panguva iyoyo yaive Blackbeard. Iyi mamiriro ezvinhu asina kugadzikana akaenderera kusvika muna 1718, apo kaputeni weBritain Woodes Rogers akagadzwa Kapteni General, naGavhuna muChigaro cheNassau, zvichiratidza kupera kwePirate Republic.
5. Anoshamisa scuba diving uye snorkeling
VaBahamas isarudzo yepamusoro kune vafambi vane kukurudzira kwekudonha, vanoshuvira kupupurira hupenyu hwepasi pemvura panguva yayo inoshamisa. Kune akawanda madhivhi madhivha kune vese snorkelers uye scuba akasiyana, kusanganisira iyo Exuma Inotora Nyika uye Gungwa Park, maburi ebhuruu eAndros, Iyo Conception Island Wall muLong Island, Iyo Henry Ford Wreck muBiminis, uye akawanda matombo anogona kuwanikwa muThe Abacos.
6. Kumhara kwekutanga kwaChristopher Columbus
Kutanga Kumhara kwaChristopher Columbus, naFrederick Kemmelmeyer, c. 1800-05. Mufananidzo wakakomberedzwa naEverett - Art - Shutterstock.com
Ruzivo rwakawanda rwuripo nezverwendo rwaChristopher Columbus kuburikidza nenzvimbo yeCaribbean, uye Bahamas inonzi ndiyo imwe yenzvimbo dzekutanga apo vashandi vake vakawira pasi. Sezvo nyaya ichienda, Columbus "akawana" nyika nyowani, kutanga chero muSan Salvador, Iyo Bahamas, kana Samana Cay muThe Bahamas. Zvinonzi zvakare paakasvika ipapo, chizvarwa cheLucayan Taino vanhu vaive vatovepo. Mukufamba kwemakore akati wandei, vanhu veTaino vakanyangarika kubva kuzvitsuwa.
7. Bahama Mama cocktail
Mufananidzo wakakomberedzwa neJJva Designs - Shutterstock.com
Iyi yekudyira yekudyira, ine rum, coconut rum, grenadine, jisi reorenji uye chinanazi muto sezvinhu zvaro zvikuru, inozivikanwa pasi rese uye inofanirwa-kuyedza kana uchishanyira The Bahamas. Zviwanire iwe nzvimbo yakanaka pamhenderekedzo yegungwa kana dziva rekushambira uye uzorore, uchizvitonhodza pachako nechinwiwa ichi. Iwe haunganyadziswe. Paunenge uri pazvitsuwa, ipa mamwe emamwe echinyakare echinyakare edza uye odha vamwe Sky muto kana a Goombay Smash!
Kutsvaga nzvimbo inopa risingagumi cocktaileta? Vashanyi ve Sandals resorts muThe Bahamas inogona kuraira husingagumi cocktaile (uye zvimwe zvinwiwa) kumabhawa, pamhenderekedzo uye mumadziva ekushambira - pasina kubhadhara kana cent. Izvo zvese zvinosanganisirwa mukugara kwako. Yese cocktaileti inosanganiswa neakanakisa bartenders echitsuwa ichi uye inogadzirwa neye premium doro.
8. Kuva nezviwi zvakawanda zvaunogona kushanyira
Zvinogona kuve zvakaoma kusarudza kuti wotangira papi kutanga ne over 700 zviwi zvangomirira kuongororwa. Neraki, pane nzira kune kupenga. Zvizhinji zvezvitsuwa hazvigarwe, izvo zvinoderedza zvinhu zvakanyanya. Zvitsuwa zvakanakisa zviri muBahamas zvekushanyira zvinosanganisira New Providence chitsuwa, Paradise Island, The Exumas, The Abacos, Andros, Bimini, The Berry Islands, Southern Bahamian Islands, Eleuthera uye Harbor Island. Vagari veBahamas vari pasi pevanhu zviuru mazana mana, uye 400,000% yenhamba iyoyo vanogara pachitsuwa cheNew Providence, imba yeguta guru reNassau.
Vazhinji vafambi vanobhururuka kupinda New Providence (Nassau), iyo inoita kuti ive inonyanya 'kuitika' nzvimbo muBahamas. Paradise Island yakanaka kumhuri dzine vana uye dzakabatana neNew Providence nemabhiriji maviri. Zvimwe zviwi zvese zvinozivikanwa se 'Kunze Kwezvitsuwa', kwaunogona kuwana runyararo uye kunyarara. Exuma inozivikanwa kuva musha kune mamwe emahombekombe ejecha jena chena uye emvura yakasvibira Iyo Bahamas iripo.
Kutsvaga an yose-inosanganisira resort muThe Bahamas? Shangu Royal Bahamian inzvimbo ine hupenyu muNassau inouya ne pachivande kumahombekombe chitsuwa, inzvimbo inoshamisa yevanoshambira (scuba diving inosanganisirwa mukugara kwedu). Sandals Emerald Bay muEexuma inozivikanwa kuve iri pakanaka refu yakatambanudzwa yechena jecha kumahombekombe uye inouya ne18-hole Championship kosi yegorofu ine maonero anoshamisa pamusoro pemvura yeEexuma.
9. Inonaka conch ndiro & zvimwe zvegungwa
Mufananidzo wakakomberedzwa neMevZup - Shutterstock.com
Ipa ako ekuravira bhudzi chiitiko chitsva muThe Bahamas, nezvitsva zvegungwa izvo zvakasiyana sezvo zvichinaka. Europe, Africa, neSouth America kurudziro inozadza chikafu muzvitsuwa nenzira inechokwadi yekukusiya iwe uchida zvimwe. Paunenge uri pane chero chitsuwa cheBahamian, edza zvese kamwechete kamwe, kubva ku conch saladi (conch ceviche), johnny makeke, crab yakabikwa, rock lobster, hove yakagochwa, nezvimwe. Mushure mezororo rako, unosungirwa kudzoka kumba uine dhishi nyowani yaunofarira, uye netarisiro nzira yekudzokorora kumba!
10. Sport hove & bonefishing
Kana iwe usati wave mutambo wehove kana bonefishing pamberi, Iyo Bahamas inzvimbo yakanaka yekutanga. Kana iwe uri mushambadzi ane ruzivo zvakadaro, iwe unonakidzwa neruzivo urwu zvakanyanya, uchiziva usati waenda, kuti mvura dzeBahamas dzakazadzwa nehupenyu hwegungwa, izvo zvine chokwadi chekuita yako yekufambisa hove iyo inonyanya kufadza. Zvekuredza mitambo, edza iyo Biminis, ine mukurumbira wekuve nayo hove yakanakisa yemitambo munyika. Muchokwadi, rudo rwaErnest Hemingway rweBiminis anonzi akaisa zviwi zviviri pamepu; zvese zvehove, uye nerunako rwavo runoshamisa. IBiminis inowanikwa makiromita makumi mashanu chete kubva kuFlorida pamhenderekedzo. Andros Island inozivikanwa nekuve yechitatu yakakura reef pasi. Iko kune kubata pfupa, iwe unogona kuyedza mhanza yako pamoyo wemazhinji mangouves asina kusvibiswa uye migero isina kudzika inogona kuwanikwa pamwe chete nechitsuwa. Long Island uye New Providence (Nassau) zvakare makuru ehove nzvimbo.
11. Mahombekombe ejecha repingi
Mufananidzo unofanirwa neBlueOrange Studio - Shutterstock.com
Bahamas ndeimwe yenzvimbo chete pasi pano kwaunogona kuwana pingi jecha mahombekombe, uye Harbour Island, iri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweEleuthera, ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuvawana. Iwe unowanzo kunzwa chiwi chiri kutaurwa se "Briland" nevagari vemo, uye zvingangove rudo pakutanga kuona kana iwe ukangotarisa pane yakasarudzika Dunmore Town, iyo yakazara ne pastel-mavara emakamuri. Paunenge uri pachitsuwa ichi uchiita zvishoma jecha uchigeza, kana kuenda kudhibha, kana parwendo rwekuredza hove. Kushanyira Harbor Island kunoita rwendo rwakanakisa zuva, uye iwe unogona kusvika ikoko kuburikidza neBahamas Fast Ferries Catamaran kana nendege kubva kuNassau. Dzimwe nzvimbo dzekutandarira, seSandals Royal Bahamian, dzinopa nzendo dzezuva.
12. Junkanoo mutambo
Junkanoo ipati chairo reCaribbean kana paimbove nemumwe. Inoitwa paKisimusi neZuva reGore Idzva gore rega rega, Junkanoo chiitiko chikuru muThe Bahamas. Mhemberero iyi inogona kutsanangurwa seye Bahamian vhezheni yemitambo. Kana usati wambosangana ne Caribbean carnival, tarisira mimhanzi mizhinji, zvipfeko, mabhendi epo, zviridzwa zvechivanhu, mapato, mafaro, zvinoyangarara, uye mufaro wakanyanya.
Insider zano: Kana iwe uri kuronga kuenda kuThe Bahamas kweJunkanoo, uchafanirwa kubhuka yako nendege kanenge mwedzi mitanhatu pamberi, sezvo akawanda mahotera nenzvimbo dzekuzorora dzinowanzo kuve dzakazara zvakazara panguva ino.
13. Bahamas yakaonekwa mune akati wandei James Bond mafirimu
Mufananidzo unofanirwa naDanita Delmont - Shutterstock.com
Kune akawanda mafirimu ane mukurumbira akatorwa muThe Bahamas, izvo hazvishamise kufunga kuti zviwi zvakanaka sei. Pakati peizvi pane 'Thunderball' uye 'Usazomboti Usazombotaurazve', ese ari maviri James Bond anotsvedza. Thunderball Grotto muEexuma Cays inzvimbo yakanaka yekudonha uye yekukweva snorkeling, uye zita rayo rinobva pakuti yaive chimiro chekumira mufirimu Thunderball, kunyanya panguva yemvura iri pasi pemvura. Madhiri anofarira kuongorora iri pasi pemvura bako, iro rinotsanangurwa nevamwe sekutyisa pakutanga, asi rinonakidza kwazvo kana uchinge wapinda mariri. Mafaro anowanikwa kubva kuSandals Emerald Bay.
14. Rudzi nemitauro yemuno - "Talkin 'Bahamian"
Mufananidzo wakakodzera Remanz - Shutterstock.com
Kwese kuenda kwainemitauro yakasarudzika kana mutauro, uye maBahamians vane nzira yakasarudzika yekutaura, kunyanya pavanotaura 'Bahamian. Vagari vepazvitsuwa vanotaura mutauro wechi creole unogona kuomera vekunze kuti vanzwisise, asi kune nzira dzekudzidza zvakawanda nezve creole yavo yemuno, ine simba reAfrica. Paunenge uri pazvitsuwa, tsvaga mabhuku emuno anogona kukubatsira kududzira zvaunonzwa, uye kunyange kukubatsira kukanda chirevo kana zviviri. Chirungu chinotaurwa zvakanyanya muBahamas, saka haufambi kuti uve nenyaya dzekutaurirana kuti uzive here kana kuti kwete neruzivo rwemuno. Heano mashoma emamwe mazwi akajairwa uye zvirevo zvaunogona kunzwa panguva yekushanya kwako:
Izvi zvinogona kuve chero munhu, zvisinei nemurume. Semuenzaniso, mumwe munhu angabvunza kuti 'mah'bey anoendepi zvakare?', Izvo zvinoshandura kuti 'munhu uyu akaenda kupi?' Ichi chinhu chaunonzwa kazhinji.
'Zvakanaka mudda kurwara!'
Uku kutaura kwekushamisika, kana kufara kwakafanana nemusiyano weChirungu wekuti "urikutamba! ', Kana" Ah zvakanaka zvangu! ".
Uyu mutsara wakajairika weCaribbean unoreva kuputsa kana kuparadza chimwe chinhu. Semuenzaniso, 'iwe ungosanganisa bhuku rangu', iro rinoshandura kuti "iwe wakangoparadza kana kukuvadza bhuku rangu '. Uyu mutsara unoshandiswawo mune zvinoitika apo munhu akaneta uye anoshandisa 'mash up' kutsanangura kungorwara, kubuda mariri kana kupera simba kwavanonzwa chaizvo.
Izwi iri rinowanzoreva imbwa yarasika, uye unogona kuona akati wandei 'mapoto' panguva yako yezororo muBahamas. Potcakes inoonekwa seyakavhenganiswa marudzi, uye zita ravo remadunhurirwa rinobva pane pfungwa yekuti vekare vaBahamian vaibika zvese muhari imwe, uye iyo 'potcake' iri musanganiswa wezvose zvakanamatira pamwechete pasi pehari, mushure mekubika.
Iwe… ini, 'dem', kana ivo. Iri izita rakakurumbira reCaribbean uye rinowanzoreva boka revanhu. Semuenzaniso, unogona kunzwa mumwe munhu achiti, 'iwe unogona kukwira kukwira naDerek dem', zvinoreva kuti 'iwe unogona kukwirwa naDerek nevamwe'.
15. Nhoroondo yekukonana kwekoloni pamwe nehuranda
Pompey Square inzvimbo iyo varanda vakaburutswa kubva mungarava muzana ramakore rechi19. Akatumidzwa zita remuranda uyo, muna 1830, akatungamira kumukira kunotungamira kuEmancipation Proclamation. Mufananidzo wakakomberedzwa naBarbara Kalbfleisch - Shutterstock.com
Nhoroondo yeCaribbean izere nemakakatanwa emakoloni, uye iyo Bahamas haisi iyo yakasarudzika mune izvi. Tsvaga zvakawanda nezve nhoroondo yeiyo Bahamas uchiri pachitsuwa nekushanyira nzvimbo senge Pompey Museum yeHuranda & Kusunungurwa mudhorobha reNassau, Bimini Museum, Man-O-War Heritage Museum muAbaco, Iyo Dolphin House muAlice Town, Albert Lowe Museum muAbaco, Iyo Bahamas Historical Society Museum muNassau, Long Island Library neMuseum, Heritage Museum yeBahamas mu Nassau, nevamwe.
16. Pirate Masimba
Mufananidzo nerubatsiro rwe tokar - Shutterstock.com
Kune akatiwandei mafoot aunogona kutsvaga uchiri muBahamas, kusanganisira Fort Charlotte, nhare hurusa pachitsuwa cheNew Providence, iri muNassau. Fort Charlotte yakavakwa naIshe Dunmore muna 1788-1789. Yakatumidzwa zita raMambokadzi Saharia Charlotte, mudzimai waMambo George the III. Iyo nhare inoratidzira dhirowa, makomba, nzira dzepasi pevhu, makumi mana emakoni, uye zvinoshamisa maonero.
Fort Fincastle yakavakwa muna 1793 ndechimwe chinokwezva chakakurumbira, icho chinowana zita rayo kubva kukapteni weBritain Lord Dunmore. Yake yechipiri zita raive Viscount Fincastle. Seizvo nhoroondo inotaura nezvazvo, Fincastle akavaka nhare yekubatsira kuchengetedza iyo Nassau Harbour yakachengeteka. Yakanga iri zvakare inobatsira yekutarisisa poindi yevapambi. Fort Fincastle inogadzirwa nematombo akachekwa.
Imwe nhare inozivikanwa muThe Bahamas iri Fort Montague, Yakagadzirwawo nematombo emunharaunda. Ndiyo nhare yekare kupfuura dzose muNew Providence chitsuwa uye iri kumucheto kwekumabvazuva kweNassau Harbour. Nhoroondo yeFort Montague inoenda kumashure kusvika muna 1725, asi chimiro chazvino chave chiripo kubvira 1741-1742, payakashandiswa nemaBritish kuchengetedza vapambi veSpain kure. Saiti iyi zvakare ine nhoroondo yekushandiswa nemauto eUnited States muna 1776.
Blackbeard's Shongwe zvakati omei kuwana, asi zvinofungidzirwa kuti zvakashandiswa naBlackbeard iye pachake, senzvimbo yekutarisisa muma1700s. Kubva iyo 'Pirates Goridhe Era', iyo shongwe yakaderera, asi ichiri chiitiko chakakosha muThe Bahamas.
17. Kudhiraivha mumapako
Mufananidzo wakakomberedzwa naRich Carey - Shutterstock.com
Makore mazhinji apfuura, zviuru zviripo, iyo mvura yakatenderedza Iyo Bahamas yaive yakadarika anopfuura zana tsoka pakadzika pane zvavari nhasi. Nekukwira kwemwero wegungwa, mamwe mapako pachitsuwa ayo ayo anonyanya kugadzirwa neremestone akanyudzwa. Izvi zvakatungamira kuThe Bahamas kuzivikanwa se imwe yenzvimbo dzakanakisa mupasi rose kubako kudhiza, Chinhu chaunofanira kufunga nezvekuedza pazororo rako muzvitsuwa!
18. Tevedza uye munda maOlympian
Mufananidzo wakakodzera waDenis Kuvaev - Shutterstock.com
VaBahamas vane menduru gumi nemana dzeOlympic kuti vazviratidze, zvikuru nekuda kwekuedza kwevatambi vanosanganisira sprinters Pauline Davis-Thompson, Tonique Williams-Darling naShaunae Miller. Menduru dzese dzechitsuwa cheOlympic dzakachengetedzwa mumitambo uye nechikepe. Sezvineiwo, iyo 14-menduru nhamba yakaenzana nechiyero cheva14 pamamirioni evagari (zvinokatyamadza tichifunga huwandu hweBahamian ingori nezve 33.9). Finland, Sweden neHungary ndidzo chete nyika dzinokwira pamusoro peBahamas 'per capita strike rate.
19. Zvinhu zvepamusoro zvekutengesa
Unogona kuwana mikana mikuru yekutenga muBahamas, chinova chisiri chimwe chitsuwa chitsuwa mudunhu iri chinogona kuzvirumbidza. Kunyangwe iwe uchitsvaga zviyeuchidzo kana epamusoro-magumo zvinhu, iwe unogona kuwana shopu kana yemuno musika unopa chimwe chinhu chinowirirana nebhajeti yako. Nassau uye Paradise Island zvese zviri zviviri sarudzo hombe dzekutengesa zvishongo, pamwe nekutsvaga zita rezita fashoni kusanganisira Louis Vuitton naGucci. Kana iwe uchida hunyanzvi kana zvimwe zvidimbu zvakasarudzika, edza kuenda kunzvimbo yemhizha mudhorobha (Nassau) uye utenge nemutengo wakanaka.
20. Nhoroondo dzimba dzekuvhenekera
Mufananidzo wakapihwa naSinn P. Photography - Shutterstock.com
Mwenje yekuvhenekesa ine kumwe kunetseka pamusoro pavo, uye kune akatiwandei ekuremekedza mwenje iwe aunogona kutarisa iwe uri muCaribbean. Elbow Reef Lighthouse, inozivikanwawo se Tariro Town Lighthouse muElbow Cay Bahamas, iri pakati pevanonyanya kushanyirwa. Hope Town yatove inonakidza, uye iyi 89-tsoka yemwenje inowedzera kukwezva kwayo. Elbow Reef Lighthouse yakavakwa muma1860s, inguva iyo dzimba dzekuvhenekera dzaizoshandiswa kuyambira kana kutungamira ngarava mugungwa uye yakapona kuunza zvishoma zvekare mune ramangwana. Maonero anoshamisa anowanikwa kubva kumusoro, izvo zvinoita kuti kukwira nhanho zana nemakumi mana kukoshesa. Iyo Hog Island Mwenje wekuvhenekera kumadokero kwekumusoro kweParadhiso Island ndiyo yekare uye inozivikanwa zvikuru mwenje muThe Bahamas uye yakavakwa muna 1817.